သမီးအတွက် ကြိုးစားပန်းစား ဖန်တီးပေးခဲ့သော ဖွေးဖွေး မေမေရဲ့လက်ဆောင်လေး – Cele Oscar
အောင်မြင်နေတဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး အဖြစ်ရပ်တည်နေ တဲ့ ဖွေးဖွေး ဟာ သူမရဲ့ မိခင် အမြင်မှာတော့ ကလေးလေး တစ်ယောက်လိုပါပဲ။ ချစ်စရာသမီးလေး အတွက် ကြည်နူးစရာ အမှတ်တရလေး ကို မေမေကိုယ်တိုင် ဖန်တီးပြီး ချစ်စရာ လက်ဆောင်လေးပေး ခဲ့ပါတယ်။ ဖွေး ရိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဇာတ်ကား တွေထဲက ပန်းနာမည် နဲ့ ဇာတ်ကားတွေ အတွက် ဂျင်း အင်္ကျီပေါ် မှာ ပန်းချီရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။
ဖွေး ကလည်း မိခင် ရဲ့ အနုပညာလက်ရာကို တမြတ်တနိုး ဝတ်ဆင်ပြီး ခရစ္စမတ်မှာ အမှတ်တရဝတ်ဆင်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ သားသမီးတွေ အတွက် မိခင်တွေရဲ့ဖန်တီးမှုဟာ လက်ရာ မြောက်လွန်းတဲ့ အနုပညာ တွေပါပဲ။ ဖွေး ကိုယ်တိုင်ကလည်း မိခင် ရဲ့ အနုပညာရသ အတွက် အရမ်းကို ကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေ ပုံပါပဲ။
အင်္ကျီလေး နဲ့ အမှတ်တရ ဓာတ်ဖမ်းနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ” အမေက ဖွေး ရိုက်ခဲ့သမျှ ပန်းနာမည် နဲ့ ရုပ်ရှင်တွေအတွက် Jean မှာ ပန်းချီ ရေးပေးခဲ့တယ် မထွက်သေးတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲက ပန်းတွေလဲ ပါတယ်ရှင့် Btw X’ mas မှာ အထူး အစီအစဉ် လေးလာပါမယ်ရှင့် ! Peaceful X’mas Eve & May God Bless you all Stay Tuned My Darlings & Oopsies! ” ဆိုပြီး ခရစ္စမတ်ဆုတောင်းစာလေး နဲ့ အတူ ဝေမျှခဲ့ ပါတယ်။
အောငျမွငျနတေဲ့ ရုပျရှငျမငျးသမီး အဖွဈရပျတညျနေ တဲ့ ဖှေးဖှေး ဟာ သူမရဲ့ မိခငျ အမွငျမှာတော့ ကလေးလေး တဈယောကျလိုပါပဲ။ ခဈြစရာသမီးလေး အတှကျ ကွညျနူးစရာ အမှတျတရလေး ကို မမေကေိုယျတိုငျ ဖနျတီးပွီး ခဈြစရာ လကျဆောငျလေးပေး ခဲ့ပါတယျ။ ဖှေး ရိုကျခဲ့ဖူးတဲ့ ဇာတျကား တှထေဲက ပနျးနာမညျ နဲ့ ဇာတျကားတှေ အတှကျ ဂငျြး အင်ျကြီပျေါ မှာ ပနျးခြီရေးဆှဲခဲ့ပါတယျ။
ဖှေး ကလညျး မိခငျ ရဲ့ အနုပညာလကျရာကို တမွတျတနိုး ဝတျဆငျပွီး ခရစ်စမတျမှာ အမှတျတရဝတျဆငျပွီး ဓာတျပုံရိုကျခဲ့ပါတယျ။ သားသမီးတှေ အတှကျ မိခငျတှရေဲ့ဖနျတီးမှုဟာ လကျရာ မွောကျလှနျးတဲ့ အနုပညာ တှပေါပဲ။ ဖှေး ကိုယျတိုငျကလညျး မိခငျ ရဲ့ အနုပညာရသ အတှကျ အရမျးကို ကနြေပျပြျောရှငျနေ ပုံပါပဲ။
အင်ျကြီလေး နဲ့ အမှတျတရ ဓာတျဖမျးနတေဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ” အမကေ ဖှေး ရိုကျခဲ့သမြှ ပနျးနာမညျ နဲ့ ရုပျရှငျတှအေတှကျ Jean မှာ ပနျးခြီ ရေးပေးခဲ့တယျ မထှကျသေးတဲ့ ရုပျရှငျထဲက ပနျးတှလေဲ ပါတယျရှငျ့ Btw X’ mas မှာ အထူး အစီအစဉျ လေးလာပါမယျရှငျ့ ! Peaceful X’mas Eve & May God Bless you all Stay Tuned My Darlings & Oopsies! ” ဆိုပွီး ခရစ်စမတျဆုတောငျးစာလေး နဲ့ အတူ ဝမြှေခဲ့ ပါတယျ။